Julio Alejandre. Kubvunzana nemunyori weZvitsuwa zvePoniente | Zvazvino Zvinyorwa
Julio Alejandre. Kubvunzana nemunyori weZvitsuwa zvePoniente
Mifananidzo: blog yaJulio Alejandre.
Julius Alexandre, weMadrid-based nhoroondo yenhoroondo munyori anogara muExtremadura, ndiye munyori we Zvitsuwa zvePoniente, yake yekupedzisira novel. Akandipa izvi indavhiyu kwaanotiudza nezvake nezvese zvishoma nezvezvaanofarira, vanyori vaanofarira, maitiro ake ekunyora kana inoitika yekutsikisa. Iwe Ndinonyatsokoshesa nguva yako uye mutsa.
Kubvunzana naJulio Alejandre
BHUKU NEWS: Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawakanyora?
JULIO ALEJANDRE: A nyaya mwana akauya mukadhi rekuverenga rekutanga, rakadaidzwa Shuramurove uye ndinorangarira kuti zvaisuwisa zvikuru; kwakazouya iyo comics uye gare gare iyo nyaya dzevechidiki. Ini ndinofunga ini ndakatanga kuve muverengi pandakaona kuti ini ndaitoda kuverenga zvimedu pane kungotarisa makatuni.
La nyaya yekutanga Ini ndaizozvinyora semwana, makore masere kana mapfumbamwe pazera zvakanyanya, nekuti panguva yezororo rezhizha mai vangu zvakarongeka pakati pehama nyaya dzemakwikwiNdinofungidzira saka tinogona kumurega azorore zvishoma. Uye ipapo isu tese takasvetuka - paive nevashanu vedu - kugadzira nyaya.
JA: Mazhinji emabhuku andakaverenga ndichiri kuyaruka, kunyanya adventures:Vana vaCaptain Grant, naJules Verne, Wekupedzisira Mohican, naFenimore Cooper, nezvimwewo, asi pamwe ndiyo yakandirova kupfuura zvese yaive Rudo rwebere zihombenaSerguisz Piasecki, inobata nezviitiko zvavo sevapanduki pamuganhu weRussia neSoviet, munguva yepakati. Kukwezva kwehupenyu hwesango uye hwekupenga, pasina mitemo, pasina mangwana, kwakaita kuti ndide kuva mubiridzi. Yakaburitswa muunganidzwa weReno uye ini ndichine kopi yacho. Iyo ine yero uye yakasununguka mapeji, asi ini ndiri kufara kuve nayo iri nyore uye, nguva nenguva, ndinodzokera kwairi.
JA: Munyori wangu wandinoda ndiye Juan Rulfo. Akangonyora bhuku rimwe chete uye muunganidzwa wenyaya, asi aisada zvimwe. Muzhinji ini ndinoda vanyori ve mashiripiti echokwadi, iyo yakachinja zvakanyanya nzira yangu yekunyora nekunzwisisa mabhuku, Mario Vargas Llosa, Garcia Marquez, Gioconda vamwe. Kubva kuSpanish, ndinogara naGonzalo Torrent Ballester naRamón J. Sénder. Zvakare Vazquez Montalban Ndinoda zvikuru. Zvese kubva muzana ramakore rechimakumi maviri. Kubva kuXIX, Becquer, yatove pakati nepakati pemazana maviri emakore, Pío Baroja.
JA: Ndingadai ndakada ziva kune vanhu vazhinji, vekunyepedzera uye vezvakaitika kare, zvekuti zvinonetsa kusarudza mumwe wavo, asi chokwadika ndingadai ndaifarira kukwiza mafudzi neanotambudzwa munhu weConradian kubva Ishe Jimne Carlos Deza, iye anonyungudika ane hunhu hwe Mufaro nemimvuri kana neanofarira Shanti AndianaBaroja.
Kana zvakadaro denga, Ndinoda iyo Hannibal kuti akakwanisa kutsanangura Gisbert haefs munhoroondo yake isingazivikanwe.
JA: Leo kubva noche, in the mubhedha, uye kana rimwe zuva ini ndikasadaro, zvinoita sekunge pane chiripo. Ndinoda kunyora neredhiyo yakavhurwa uye vhoriyamu yakaderera zvakanyanya. Imwe hobby: pandiri kunyora nganonyorwa ini ndaingoverenga genre Mapurisa. Zvinondibatsira kubvisa.
JA: Ini ndinoda kunyorera iyo mangwanani, inova pandinonyanya kuisa pfungwa dzangu, kunyangwe basa richindipa mashoma mikana yekuzviita. Uye nzvimbo, padhuze ne hwindo rakatarisa kunze, kutarisa kumusoro uye kugona kufungisisa mamiriro ezvinhu.
AL: Chii chatinowana munoverengeka yako Zvitsuwa zvePoniente?
JA: Iyo ingangoita odyssey ye ngarava ndizvo kurasikirwa in the Maodzanyemba pacific, mu mukupera kwezana ramakore rechi XNUMX, uye haina kuzonzwikwa kubva zvakare.
Inowira mukati meiyo nhoroondo yemhando, asi iri chaizvo iyo mutambo wekusingaperi wekurwira hupenyu: zana nemakumi masere nevaviri vanhu vezvikamu zvese nehunhu, kubva kune vafambisi vezvikepe kusvika kune vanogara, vanokudzwa uye vanhuwo zvavo, varume, vakadzi nevamwe vana, vanokandwa mumakungwa asina kugadzikana nenyika dzesango vachitsvaga hupenyu huri nani. Ivo vaienda kunosangana ne Solomon Islands, asi vakawana Australia; Vakatsvaga kukudzwa, asi vakawana gehena. uye pachinzvimbo chekurumbira, nhoroondo yakavaisa mukukanganwa. Microcosm yehukama, ruvengo, rudo, kuvimbika uye kutengesa, kusuwa uye hukuru, iyo nyaya, muchidimbu, yatakagadzirwa tese.
AL: Iwe unofarira mamwe marudzi kunze kwenhoroondo yenhoroondo?
JA: Ndine muromo wakanaka uye ini ndakaverenga chinenge zvese. nhetembo, nhoroondo, sainzi uye yakawanda nhoroondo, zvenguva ipi, genre kana zvinyorwa zvazvino, novel kana pfupi nyaya, yakanyorwa muchiSpanish kana kushandurwa, vanyori vakasimbiswa kana indies. Asi, kuyedza kudoma, ini ndichakuudza kuti ndinoda iyo mashiripiti echokwadi, the nhema nhemala social novel, izvo zve adventuresla mukundala ngano yesainzi, the kufara.
JA: Ndinoifarira verenga mabhuku akati wandei panguva imwe chete. Iye zvino ndiri kubatanidzwa nebhuku ra zvinyorwa nhoroondo, Zvitatu zvegungwa, naMagdalena de Pazzis, sarudzo yenyaya kubva Stevenson uye inoverengeka nezvake kupondwa kwaOlof Palme, Mukudonha kusununguka, sekurotanaLeif G. Persson, inonakidza kwazvo, nenzira.
Uye ndiri kunyora una nhoroondo yenhau yakaiswa muzana ramakore rechiXNUMX, saLas Islas de Poniente, asi dingindira rayo rinotarisa pane refu hondo for the Atlantic domain.
JA: Vanyori vari kuwedzera uye vaparidzi vari kudzikira. Ndiyo tsananguro yakakwana yepanorama yakaoma. Iyo dzakawanda kutsikisa dzimba dzaivapo muSpain makumi mashoma emakore apfuura dzave mumaoko e mapoka makuru avo vanowanzo bheja pane inishuwarenzi, vaparidzi pakati nepadiki ndizvo kuguta yezvakatanga, uye desktop kutsikisa Inova inoshanda imwe nzira kutsikisa.
Pachedu, makwikwi ekunyora akandibatsira zvakanyanya, yenyaya uye novel. Dai pasina ivo, ndingadai ndisina kumboburitsa.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo iri kukuomera here kana iwe uchakwanisa kugara nechimwe chinhu chakanaka?
JA: Kwandinogara, mutaundi diki mu Extremadura zvakadzika, ndinofunga dambudziko riri kukunda zvirinani: hazvina kufanana kuti uzviise pasi pevhu remakumi masere mativi emamita pane imba ine patio, munda wemichero kana corral. Zvisinei, ini ndagara ndichifarira kuona iyo divi rakanaka rezvinhu, zvisinei nekuti angave akaoma sei, uye denda iri rakanditendera shandisa nguva yakawanda nemhuri yangu uye nyora zvisati zvamboitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Julio Alejandre. Kubvunzana nemunyori weZvitsuwa zvePoniente
Zvinogara zvichinakidza kusangana nevanyori kuburikidza neaya mabvunzurudzo, mavambo avo uye kurudziro yavo inodziya kwandiri.
7 kuburitswa kutsva kwaFebruary kwese marudzi